Mon, Jan 17, 2022 | 21:52:47 NST
Posted: Saturday, May 26, 2018 19:42 PM (4years ago )
सुर्खेतमा क्रिकेटको कुनै पनि घरेलु लिग भएको यो पहिलो पटक हो । प्रतियोगिताले सुर्खेतका मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशभरिका युवा क्रिकेटरलाई हौसला पनि दिएको छ ।
राष्ट्रिय टीमका खेलाडीहरुले सुर्खेतमा पनि क्रिकेटको माहोल बढ्दै गएकोमा खुशी व्यक्त गरे । नेपाली राष्ट्रिय टीमका स्पिनर शक्ति गौचन नेतृत्वको रुपन्देही ११ टीम केपिएल क्रिकेटमा उपविजेता बनेको छ । गौचनसँग उज्यालो सहकर्मी मुना हमालले गरेको कुराकानी :
पहिलोपटक सुर्खेतमा आएर क्रिकेट खेल्दा कस्तो लाग्यो ?
रमाइलो लाग्यो । पहिलोपटक सुर्खेतमा आएर क्रिकेट खेलेर उपविजेता बन्न पाइयो । सुर्खेत, राजा वीरेन्द्रलाई पनि धेरै मन परेको ठाउँ भनेर सुनेको थिएँ, यहाँ घुम्न आउने सोच थियो पहिलोदेखि नै । संयोगले सुर्खेतमा क्रिकेट पनि खेल्न पाउँदा आउन पाउँदा एकदमै खुशी लाग्यो ।
सुर्खेतमा क्रिकेटको माहोल कस्तो पाउनुभयो ?
सुर्खेतमा क्रिकेटको क्रेज मैले सोचेको भन्दापनि धेरै राम्रो पाएँ । टोलटोलमा सानासाना भाईहरु पनि बाटोमा क्रिकेट खेलिरहेकोे देखें । मलाई विश्वास नै थिएन सुर्खेतमा पनि क्रिकेट यति लोकप्रिय भईसक्यो भनेर । नेपालमा काठमाडौँ, धनगढी, रुपन्देही लगायत ठाउँमा क्रिकेटको धेरै माहोल छ तर अहिले सुर्खेतमा त्यस्तो खालको वातावरण मैले देखें । खेल भइरहदा दर्शकहरु पनि उत्साहित पाएँ । यो राम्रो संकेत हो नि ।
देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशले केपिएल आयोजना गर्यो । यसले देशको समग्र क्रिकेट विकासमा कस्तो सहयोग गर्ला ?
यसले राष्टिय खेलाडीलाई भन्दापनि नयाँ प्रतिभालाई बढी सहयोग पु¥याएको जस्तो लाग्छ । राष्टिय खेलाडीहरुसँग खेल्न पाउँदा नयाँ प्रतिभाले ठुलो अनुभव पाउँछन् । एक्सपोजर भनेको त्यही हो । किनकी हामीसँग अहिले प्रशस्त क्रिकेट एकेडेमीहरु छैनन् ।
यस्ता खेलले नै स्टेप बाइ स्टेप खेलाडीको विकासमा सहयोग पु¥याउने हो । बर्षेनी वा मासिक रुपमा कुनै न कुनै प्रतियोगिता भए भने त्यसले स्थानीय प्रतिभालाई ठूलो सहयोग गर्छ ।
मोफसलमा क्रिकेट माहोल त बढेको छ, तर सामान्य चौरमा खेल्नुपर्ने अवस्था छ । सुर्खेतमा पनि तपाइहरुले चौरमै खेल्नुभयो । मोफसलमा क्रिकेटको विकास गर्न के गर्नुपर्ला ?
हो । सुर्खेतमा रंगशाला भएपनि तर त्यो क्रिकेटका लागि व्यवस्थित छैन । तैपनि क्रिकेट प्रतियोगिता भइरहेको छ । खेलाडीहरुले खेले । दर्शकले क्रिकेटको मज्जा लिए । यसले क्रिकेटको दिगो विकास हुँदैन ।
मुख्य कुरा भनेको क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्नुपर्यो । जिल्ला जिल्लामा बर्षेनी समिति नै बनाएर क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालन नगरेसम्म क्रिकेटको अवस्था यहि हो । यसका लागि विद्यालयस्तरमै क्रिकेटको माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । खेलकुद सामग्रीमा अब क्रिकेट बल, ब्याट, स्टम्प थप्नुपर्छ । आक्कलझुक्कल बर्षको एउटा प्रतियोगिता भएर मात्र पुग्दैन । विद्यालयस्तरमै क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्नुपर्छ ।
यसकालागि अहिलेकै राष्ट्रिय टिमका खेलाडी नभए पुर्व खेलाडीहरुलाई स्कुलमै क्रिकेट प्रशिक्षकका रुपमा नियुक्त गर्नुपर्छ । जिल्ला जिल्लामा पनि क्रिकेट संघ गठन भएर सक्रिय रुपमा प्रतियोगिता गर्नुपर्यो । सुर्खेतमा पनि रंगशाला अर्थात क्रिकेट खेल्न सक्ने चौर धेरै छन् ।
तिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो । यति भयो भने पहिलो पटक आइपिएल खेल्ने सन्दीप लामिछाने जस्ता खेलाडी सुर्खेत लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा कति छन् कति ? तर यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको विवाद सुल्झाउनुपर्छ । क्यान नभएसम्म सरकारले पनि योजना मात्रै गरेर पुग्दैन ।
क्यानबाट क्रिकेटका प्रतियोगिता नभएको धेरै नै भयो । निजी क्षेत्रका केही संघसस्थाले मात्रै क्रिकेट प्रतियोगिता गरिरहेका छन् र आक्कलझुक्कलै भएपनि घरेलु प्रतियोगिता भइरहेका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले क्रिकेटको विकासका लागि गर्नुपर्ने जति काम गरेन । क्यानले पनि आन्तरिक विवाद लगायतका कारणले गर्दा केही गर्न सकेन । तर निजी क्षेत्रकै संघसस्थाले गर्दा नेपालमा क्रिकेटको माहोल दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ ।
सुर्खेतले यो राष्ट्रिय स्तरको केपिएल आयोजना गरेर एउटा गतिलो उदाहरण दिएको छ । यस्तै प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशका अरु जिल्लाले किन नगर्ने ? यो फेरी निजी क्षेत्रको एक सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको रहेछ ।
सुर्खेतका खेलकुद विकास समिति अनि अरु जिल्लाका खेलकुद सरोकारवालाहरुले अब यस्ता क्रिकेट प्रतियोगिता नगर्ने ? त्यसैले सुर्खेतले यो आयोजना गरेर जुन सन्देश दिएको छ । यसको अनुसरण अरु जिल्लाले पनि गर्छन् ।
र हामी फेरि सुर्खेत आसपासका जिल्लामा पनि क्रिकेट खेल्न आउन पाउँछौँ जस्तो लागेको छ । यस्तो भयो भने राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको प्रदर्शन पनि खस्किदैन । अनि नयाँ प्रतिभाले पनि राम्रो ठाउँ पाउँछन् ।
केपिएलको स्तर चाहिं तपाईले अपेक्षा अनुसारको रह्यो कि रहेन ? किनकी सुर्खेतमा क्रिकेट प्रतियोगिता पहिलो पटक भएको हो ?
हामी नयाँ खेलाडीको एक्सपोजर पनि हुन्छ भनेर केपिएल खेल्न सुर्खेत आएका हौँ । १४ जनालाई छनौट गरेर मैले कप्तानी गर्दै आएका थियौँ । सोेचेजस्तै भयो । राष्ट्रियस्तरका खेलाडीले आफ्नो प्रदर्शन देखाए । अरु राम्रा खेलाडीले पनि राम्रो प्रदर्शन गरे । हामी सुर्खेत आएर खेल्न पाउँदा सबैभन्दा बढी त्यसैमा खुशी छौँ । सन्तुष्ट छौँ ।
तपाई आफ्नो ब्यक्तिगत प्रर्दशनबाट कतिको खुशी हुनुहुन्छ नि ?
खुशी छु । मैले सकेजति राम्रै गरे जस्तो लागेको छ । टिम रुपन्देही ११ को कप्तानको हिसाबले पनि प्रदर्शन राम्रै गरें भन्ने लाग्छ । सबै खेलाडीको प्रदर्शनले फाइनल पुग्यौ । तर फाइनल जित्न सकेनौँ । यद्यपी प्रतियोगिताभरि हामीले उत्कृष्ट खेल्यौं । त्यो सुर्खेती क्रिकेटप्रेमीले पछिसम्म पनि हामीलाई सम्झिरहनेछन् ।